Home » Listings » Green-Built Home Near Chapel Hill, NC - 3.3 Acres
Matetika no hita ao amin'ny tokantrano natsangana Eoropeana, ity trano tokana tsy manan-tsahala sy manana tanjona ity dia manodidina ny kianja afovoan-trano. Mamboly sy mampitombo ny zavamaniry ao amin'io toerana voaaro io. Ankafizo ny fijerena azy ireo avy any amin'ny lalan-trano mihodina ao an-trano na miala sasatra eo an-tokotanin'ny lakolosy.
Ny efitrano fandriana sy ny tranomboky dia mitazona ny toerana mangina sy malalaka eo akaikin'ny làlana iray izay manompo ireo faritra ireo. Misy efitrano roa feno be dia be misy efitra malalaka.
Kaody positaly: 27243
Taona namboarina: 1999
Feo kodiarana: 2706
efitra fandroana: 3.1
Previous ListingUSVI Luxury St Thomas ao amin'ny Bay MagensNext ListingLAKEFRONT LOG HOME, Tahaka ny New - 5.85 Acres
USVI Luxury St Thomas ao amin'ny Bay Magens
LAKEFRONT LOG HOME, Tahaka ny New - 5.85 Acres